RØDE एकदम पोडकास्ट उत्पादन स्टूडियो रिलीज! | Martech Zone
RØDE एकदम पोडकास्ट उत्पादन स्टुडियो रिलीज!
मङ्गलबार, डिसेम्बर 11, 2018 मङ्गलबार, डिसेम्बर 11, 2018 Douglas Karr
एउटा कुरा जुन म यस पोष्टमा साझेदारी गर्न सक्दिनँ त्यो हो कि मेरो पोडकास्टहरूको लागि खरीद गर्न, मूल्या ,्कन गर्न, र परीक्षणहरू खर्च गर्न म कति पैसा र समय खर्च गर्दछु। पूर्ण मिक्सर र स्टुडियोबाट कम्प्याक्ट स्टुडियोमा जुन म ब्याकप्याकमा राख्न सक्दछु, युएसबी माइक्रोफोनसम्म म ल्यापटप वा आईफोन मार्फत रेकर्ड गर्न सक्दछु ... मैले ती सबै प्रयास गरेको छु।
मितिमा समस्या सँधै इन-स्टुडियो र टाढा पाहुनाहरूको संयोजन भएको छ। यो यस्तो मुद्दा हो कि मैले केहि उत्पादकहरूलाई सम्पर्क गरे कि कसैलाई प्रोटोटाइप बनाउन सक्छु कि भनेर हेर्न।
यो कुनै जटिल समस्या होइन, तर यसलाई केहि लचिलो हार्डवेयरको आवश्यकता पर्दछ। जब तपाईंसँग टाढाको पाहुनाको अतिरिक्त धेरै पाहुनाहरू छन्, टाढाको पाहुनाको ढिलाइले उनीहरूको हेडसेटमा उनीहरूको आफ्नै आवाजको प्रतिध्वनित गराउँदछ। त्यसोभए, तपाईंले बस सिर्जना गर्नुपर्नेछ जुन टाढाको पाहुनाको आवाजलाई आउटपुटमा तिनीहरूलाई फिर्ता छोडिनेछ। यसलाई मिक्स-माइनस भनेर चिनिन्छ।
तर म सबै उपकरणहरू बाहेक सडकमा प्रोग्रामयोग्य मिक्सरको वरिपरि घुम्न सक्दिन, त्यसैले मैले समान कन्फिगरेसन कसरी सिर्जना गर्ने भनेर बुझेँ। मेरो म्याकबुक प्रोमा भर्चुअल बस प्रयोग गर्दै। र यो सेटअप गर्न बटनमा अझै पनि दुखाई छ।
त्यो सबै परिवर्तन भएको छ।
अब, पेशेवर गुणवत्ताको पोडकास्टहरू सिर्जना गर्ने सपनाको साथ सबैले यस नयाँ र शक्तिशाली प्लेटफर्मको साथ निर्बाध रूपमा त्यसो गर्न सक्षम हुनेछन्। यो RØDE का लागि उल्लेखनीय नयाँ दिशा हो: प्रत्येक स्तरको पोडकास्टर्सका लागि सबै-इन-एक स्टुडियो।
म आज मेरो भिडियोग्राफर, एब्लोग सिनेमा भ्रमण गर्दै थिएँ, र उसले सोध्यो यदि मैले नयाँ देखेको छु भने RØDECaster प्रो - पोडकास्ट उत्पादन स्टूडियो। यहाँ एक सिंहावलोकन छ।
तर पर्खनुहोस् ... त्यहाँ अझै छ। यहाँ विस्तृत Rundown छ:
के RØDE सबै कुरा सोच्नुभयो? अन-बोर्ड सुविधाहरू समावेश:
Mic माइक्रोफोन च्यानलहरू: वर्ग A, सर्वो स्टूडियो कन्डेनसर माइक्रोफोनको साथसाथै परम्परागत गतिशील माइक्रोफोन सक्षम इनपुटहरू।
3.5mm TRRS का लागि आगतहरू अलग गर्नुहोस् (फोन वा उपकरण), ब्लुटुथ (फोन वा उपकरण) र USB (संगीत / अडियो वा अनुप्रयोग कलहरूको लागि)
फोन र अनुप्रयोग कल - कुनै प्रतिध्वनि बिना (मिक्स-माइनस)। सजीलै स्तरहरू समायोजित गर्नुहोस् - कुनै थप गियर वा गन्दा सेट अप छैन।
प्रोग्राम गर्न योग्य ध्वनी प्रभाव प्याडहरू: Color र color् कोडित ध्वनी प्रभावहरू प्रोग्रामेबल जिing्गल्स र ध्वनि प्रभावहरूको लागि ट्रिगर गर्दछ।
RØDECaster Program प्रोमा वा सफ्टवेयर मार्फत तपाईंको कम्प्युटरबाट प्रोग्राम गर्न योग्य।
APHEX® एक्साइटर ™ र ठूलो तल ™त्यो धनी, न्यानो टोनको लागि पेटेन्ड प्रोसेसिंग केवल पेशेवर प्रसारण प्रणालीहरूमा पाइन्छ। यसमा मल्टिस्टेज डायनेमिक्स पनि समावेश छ: सression्कुचन, सीमित र आवाज-गेटि।।
टच स्क्रिन सबै व्यावसायिक सेटि easyहरूको सजीलो नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ, व्यावसायिक भोकको दायराको लागि इक्वेलाजर प्रिसेटहरू सहित।
चार उच्च-शक्ति हेडफोन आउटपुटहरू र स्टेरियो स्पिकर, स्वतन्त्र भोल्युम नियन्त्रणको साथ प्रत्येक।
रेकर्डहरू प्रत्यक्ष माइक्रोएसडी कार्डमा पूर्ण स्व-निहित अपरेसनको लागि, वा USB मार्फत तपाईंको मनपर्ने कम्प्युटर र सफ्टवेयरमा।
प्रत्यक्ष प्रसारण क्षमता.Today को रेडियो!
यो अचम्मको केहि छोटो छैन! प्रोग्राम गर्न योग्य ध्वनि च्यानलहरूले मलाई मेरो इन्ट्रो, आउट्रो, र फ्लाईमा विज्ञापनहरू पूर्वप्रोग्राम गर्न अनुमति दिनेछ ताकि म शाब्दिक रूपमा रेकर्ड गर्न सक्छु र मेरो पोडकास्ट होस्टिंगमा अपलोड गर्न सक्छु।
प्रत्यक्ष भिडियोको बारेमा के हुन्छ?
यस इकाईको अर्को फाइदा भनेको यो जस्तो प्रणालीको साथ जोडा बनाउने क्षमता हो स्विचर स्टुडियो। स्टेरियो आउटपुट तपाईंको लाइभ जडित उपकरणमा अडियो ड्राइव गर्न सक्दछ र तपाईं आईप्याडहरू र तपाईंको पाहुना बीच आईफोन फेसटाइम वा स्काईप कल मार्फत पछाडि स्विच गर्न सक्नुहुन्छ!
अधिक रेकर्ड गर्न मैले अर्को वर्ष यात्रा गरें लिलियन्स डेलको साथ पोडकास्टहरू... र यो एकाई मसँग जानेछ। एकाई केवल p पाउन्ड मा तौल गर्दछ त्यसैले यो वरिपरि लुगा गर्न एकदम खराब हुँदैन। माइक्रोफोन, केबलहरू, र हेडफोनहरूमा थप्नुहोस् र मलाई पा whe्ग्राहरूबाट केहि प्राप्त गर्न आवश्यक पर्न सक्छ, तर त्यो ठीक छ।
यदि मलाई एक गुनासो भएमा यो इकाई मल्टि-ट्र्याक रेकर्ड हुँदैन। त्यसोभए, यदि पाहुनाले खाँसी खान्छ जब अर्को अतिथि बोल्दै छ ... तपाईं यससँग अडिनुभयो वा तपाईंले शो रोक्नु पर्छ र सेगमेंट पुनःप्रक्रमित गर्नुपर्‍यो, त्यसपछि पोष्टहरू उत्पादनमा सँगै टाँस्नुहोस्। आशा गर्नुहोस् कि भविष्यका संस्करणहरूले माइक्रो एसडी कार्ड र USB आउटपुट मार्फत मल्टि-ट्र्याक रेकर्डिंग सक्षम गर्दछ।
मिठाईको पानीमा रेडकास्टर प्रोको लागि किनमेल गर्नुहोस्
टैग: मोबाइल र ट्याब्लेट मार्केटिंगपोडकास्ट स्टुडियोरातोRØDECasterUSBUSB-c
अमेजन वेब सेवाहरु: AWS कति ठुलो छ?
डिजाइन सोच: मार्केट, गुलाब, काँडा गतिविधिहरू लागू गर्दै
हाम्रो नवीनतम पोडकास्ट